Izvo zvisingaenzaniswi uye zvesaenzi zviitiko paMuseum yeUrsuline Monastery - Tamban RELAY
Izvo zvisingaenzaniswi uye zvesainzi zviitiko paMuseum yeUrsuline Monastery
By TELES RELAY On Feb 29, 2020
Masayendisiti anowana maitiro ekugadzirisa DNA mu…
Iyi nyaya kubva mukati me epicenter ye…
Imbwa yakaedzwa kuti ione coronavirus, asi hapana anoziva…
Kurambana. Iyo Tsika Pole yeUrsuline Monastery inozivisa chirongwa chezviitiko zvekuputika kwemasikati icho chakanangana nekubatsira kushanya kuchiratidziro. Zviri nokutamba kuti iwe kukura. Izvi zvinopa mitambo nematoyi kubva zvakavanzika zvekuunganidza yeUrsulines yavaishandisa pakudzidzisa pamwe chete nemafambiro ekuzorora muzvikoro zvavo zvebhodhi.
Sezvakangoita maUrsulines pavakasvika muNew France muna 1639, vagari vepachikoro ichi vaingova nechipfuva chine trousseau yavo. Akafuridzirwa nepfungwa iyi, Andréanne Duchesneau, achitarisira chirongwa chekudzidzisa paMuseum, akagadzira chiitiko ichi. Pakatenderera chipfuva ichi kuti akafungidzira kuvhima chaiko kwezviratidzo apo kuwanikwa kwe diary re boarder anonzi Joséphine, anotibvumira kudzokera kumashure kusvika 1920. Zviratidzo izvi zvimwe zvinotitendera kuwana kusanganiswa kwekuvhura chipfuva chakakurumbira. "Chakavanzika chaJoséphine inzira inonakidza yekuziva zvimwe zvikamu zvehupenyu hwevagari vechikoro uye inotitungamira kuti tidzidze zvakawanda nezvedzidzo yeUrsulines. Vokupedzisira vagara vachishandisa nzira dzekutanga nedzokugadzira kudzidzisa, kunyanya nguva yakasvika yekuti vazvipire muzvidzidzo zvakaoma sainziAnotsanangura Ms. Duchesneau. Chirongwa ichi chinopa mhuri basa rekugadzira zootrope iyo inovagonesa kuwana cheti chetoyi chakavambwa muzana ramakore re19 uye chinoshandiswa mumakirasi eUrsuline yenguva iyoyo. Vana vanogona kubva nekwavo zvisikwa.
Zviitiko zveShuviro Break zvinoitika zvinogara zvichiitika kubva Chipiri kusvika Svondo Kurume 8. Hapana chekuchengeta chinodiwa. Bata purogiramu yose pa www.PoleCultureldesUrsulines.ca
Izvo zviitiko zvekupwanya kwemasikati zvakagadzirwa zvakabatana pamwe nekuratidzwa kunotamba kweUrsuline Cultural Center.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.quebechebdo.com/local/journal-le-quebec-express/199142/des-activites-insolites-et-scientifiques-au-musee-du-monastere-des-ursulines/
MaDemocrat, nguva yako iri kupera - New York Times
[Makambani akahaya] Ruzivo rwekurangarira vhiki yaFebruary 24 | kubudikidza @Carenews
Masayendisiti anowana maitiro ekugadzirisa DNA yevanhu ...
Iyi nyaya kubva mukati meiyo epicenter yeiyo coronavirus denda ...
Imbwa yakaedzwa kuti ione coronavirus, asi hapana munhu anoziva izvi ...
Ko kukanganisika kwepasipasi pakupedzisira kunotorwa kwakakomba nenharaunda yesainzi?